Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): 2017
at 12/18/2017 12:53:00 PM
Myen Ningbaw ni kade daram manai makai re ngu hpe 1824 ning na First Burmese War nga kaw ka da ai.
Myen Innwa Hkawhkamaluksuk ni Ingalik Du ni hpe laika shagun ai hta Assam majan byin ai gaw shan hteaMayam amyu re ai Assam ni hkalem ai majaw re nga nna shana ma ai. Dai majaw, majan sum ai raitim atsawm angwi apyaw sha htingnut shangun na matu Inglik du ni hpe tang sawn lai wa sai.
Matut nna ndai laika buk hta anhte Jinghpaw (Singpho) ni gara hku Ingalik ni hte gasat ai lam. Myen ni hte Jinghpaw Du ni gara madang hku nna ganawn mazum ai lam. Anhte gara hku mayam rim la ai lam ni ka masing da ai labau laika buk re.
Ya 2017 ning du hkra nshai nga ai
1. Bawsang ni hpe mayam hku mu ai ahkyang
2. Mungdan kaba ni hte ganawn yang anhte amyu kaji ni she shuk shangut ai ni re ngu ningmu jaw ai akyang
3. Manghkang byin yang Bum nga masha ni hpe regau saw ai / luksuk shajat ai ladat
4. Colony ginra ni hpe myit garan nna uphkang ai akyang, nhprang sut rai ni hpe hkum mara jai lang jahten sharun ai.
Lahta lam ni hpe hti hkaja lu na re.
Du Kaba Malizup Zau Mai (1936-2017), A Reflection on His Life and Legacy
at 12/14/2017 11:55:00 AM
Du Kaba Malizup Zau Mai passed away ataprivate hospital in Rangoon afteralong illness on October 27. Du Kaba Zau Mai was of the Nhkum clan but apparently took Malizup (Mali River Confluence) as his family name to honor his Hka Hku heritage.
He was one of the founding members (popularly referred to as the7Stars) of the Kachin Independent Army (KIA). It was during his student days at Rangoon University that he and the other6Kachin university students got together to secretly planagroup that would fight for Kachin rights. They had been frustrated by the lack of development and self-determination rights for the Kachin inasystem centrally controlled from Rangoon. Their deliberations led to the forming of the Kachin Independence Army (KIA) in February 1961, convinced that true autonomy could only be achieved by the taking up of arms.
Du Kaba Zau Mai, as secretary of the7Stars Group, was assigned the responsibility of overseeing administrative affairs. As such, he served in the Burma Civil Service foracouple of years after graduation to gain administrative experience. It was only in 1963, that he abandoned his position as Sub Divisional Officer at Sinlum, to join the KIA.
He was also notable asasignatory to the historic 1994 agreement between the KIO and the State Law and Order Restoration Council (SLORC) military government that ushered in 17 years of ceasefire. Maran Brang Seng, as Chairman at that time, was to sign on behalf of the KIO, but on the verge of signing the treaty, he sufferedamassive stroke that left him paralyzed. And so Du Kaba Zau Mai as Vice Chairman, took over and signed the treaty in his stead. When Chairman Brang Seng passed away in Aug 1994, Du Kaba Zau Mai was duly elected Chairman and Chief of Staff of the KIO/KIA. However in 2001, an internal coup stripped him of all his posts and placed him under house arrest. He was only allowed to go free in 2004, under the pretext of retiring for “health reasons”.
Reaction to his legacy asaleader has been mixed. Most of the negative reaction stems from his time at the helm of the KIO/KIA after the 1994 ceasefire treaty. His leadership style came under criticism as being politically and militarily inept. It isafact that under his watch, rampant exploitation of Kachin natural resources by foreign and government “crony” companies took place, andamarked increase in military deployments in Kachin areas occurred. Some have even gone so far as to label hima“traitor” to Kachin ideals.
Then there are those who view his leadership role inamore positive light. They are among those who knew him and had worked closely with him. Dr. Manam Tu Ja,aformer Vice President of the KIO, and current leader of the Kachin State Democracy Party (KSDP), asserts in an interview with the Burmese Program of the BBC soon after Du Kaba Zau Mai’s demise, that he wasaskilled leader, selfless in his dedication to the Kachin cause. Also, there are those within the KIA who attest to his military prowess, saying he is the only general with more than 100 battlefield victories under his belt, adding that the most the other generals had achieved was around 50, never even nearahundred.
Daw Lahpai Seng Raw, founder of the Metta Development Foundation, credits Du Kaba Zau Mai with providing her the foresight and support needed to establish Metta, the non-governmental organization that has been at the forefront helping communities recover and rebuild from the effects of civil war and natural calamities, since its inception in 1997.
Not surprisingly, the most touching tribute to Du Kaba Zau Mai’s legacy, came from his only son Padang Zau Du. In his eulogy, he related his father’s response to the internal coup that put him under house arrest for about3years. He said that at the time of the coup, many of his loyal followers were ready to take up arms to defend him and resist the attempt to remove him from his position, but his father stopped them saying he was willing to be taken into custody, even give up his life if needed, to prevent his beloved KIO/KIA from being split into two. To his son, that is “true courage”,ameasure of his strength of character, andalegacy to be treasured by him and his family.
Pang mu shayi
Thailand Mung dan kata hta dap jung laiwa sai, Wunpawng mungdan shanglawt hpyen dap Htam Ngawp Bum Na Labau Kadun
at 11/23/2017 01:40:00 PM
Hkristan Hpyen Ma
Htap ngawp kadawng na labau kadun
at 11/23/2017 01:34:00 PM
Htam ngawp kadawng na labau
at 11/23/2017 01:31:00 PM
Num Shawng Chye Wa Ai Lam
at 11/10/2017 12:27:00 PM
Jinghpo Wunpong Labau Sara Kaba
#Sara_Htoi_Man (Duwa Manam Tawng) Sawk madun shalen da ai re.
Wunpong htung hking labau hpe chye da matsing sumhting da ging nga ai law.
🇴NE 🇰achin ဆိုသည်မှာ
at 11/10/2017 11:54:00 AM
Shatapru Post Media
( ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး )
ကချင်မျိုးနွယ်စုဝင်များ ဖြစ်ကြသော ဂျိန်းဖော့၊ လချိဒ်၊ လောဝ်ဝေါ်၊ လီဆူ၊ ရ၀မ်နှင့် ဇိုင်ဝါး လူမျိုးစုတို့သည် ရှေးပဝေသဏီ အချိန်ကာလမှစ၍ တူညီသော နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းဖြင့် နေထိုင်ခဲ့ကြသည့် ညီရင်းအစ်ကို မောင်ရင်းနှမများ ဖြစ်ကြသည်။ ယခုအခါ ကချင်မျိုးနွယ်စုဝင်များ၏ ဘာသာစကား (Dialect) အမျိုးအစားစုံလင်ကွဲပြားမှုကို အကြောင်းပြကာ တိုင်းတစ်ပါးသား လူမျိုးခြားများမှ ကချင်လူမျိုးကို မျိုးနွယ်စုအမည်များဖြင့် အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ ခွဲခြားရန် ကြိုးစားနေကြသည်။
အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာ တစ်နေရာမှ အခြားတစ်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြသည့် အတွက် နေရာဒေသအပေါ်မူတည်၍ လေယူလေသိမ်း၊ စကားလုံးနှင့် ဝေါဟာရ ကြွယ်ဝမှုတို့တွင် အထိုက်အလျောက် ကွဲပြားမှုများရှိသော်လည်း ကချင်မျိုးနွယ်စုဝင်များသည် ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်း၊ ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှု နှင့် ရွှေ့ပြောင်း အခြေချနေထိုင်ခြင်းတို့၌ တူညီကြသည့်အလျောက် မျိုးနွယ်စုတစ်ခုနှင့် တစ်ခု ခွဲခြားမရနိုင်ဘဲ တစ်ခုတည်းသော လူမျိုးအဖြစ် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ နေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။
ကချင်မျိုးနွယ်စုဝင်များသည် မိမိတို့၏ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုသမိုင်းတွင် အထင်ကရ ဒေသ များဖြစ်သည့် မလိခူးမဂျွယ် (Mali Hku Majoi)၊ ကျိုင်ခူးမဂျွယ် (Chyai Hku Majoi)၊ ခရန်ခူးမဂျွယ် (Hkrang Hku Majoi) စသည့် ဒေသများ၌ အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြပြီး မြောက်အရပ်မှ တောင်ဘက်အရပ်သို့ ဆက်လက် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြသည်။ ဤသို့ အရှေ့၊ အနောက်နှင့် မြောက်ဘက်မှ တောင်ဘက်သို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြသည့်အတွက် ဘာသာစကားအရ အရပ်လေးမျက်နှာကို ခေါ်ဝေါ်ရာ၌ပင် အရှေ့(Sinpraw)၊ အနောက်(Sinna)၊ မြောက်(Dingdung)၊ တောင်(Dingda) ဟူ၍ အစဉ်လိုက် သတ်မှတ် ခေါ်ဆိုကြပါသည်။
ကချင်မျိုးနွယ်စုဝင်များ၏ ဘိုးဘေးများဖြစ်ကြသည့် ရှေးဦးကချင်လူမျိုး(Proto Kachins)များသည် မွန်ဂိုဒေသ(Mongolia)တွင် စစ်တိုက်ကာ နေထိုင်ခဲ့ကြသူများ ဖြစ်သည်။ ၎င်းခေတ်ကို Xiongnu (匈奴) ခေတ်ဟု ခေါ်သည်။ တရုတ်ပြည်ရှိ မဟာတံတိုင်းကြီးကို မဆောက်လုပ်မီ ခေတ်ကာလ ဖြစ်သည်။ ထိုခေတ်ကာလတွင် ပြောဆိုခဲ့သည့် စကားအချို့ကို ရ၀မ်(နုန်)လူမျိုးများ ယနေ့တိုင်အောင် သုံးစွဲပြောဆို နေကြဆဲဖြစ်သည်။
ရှေးဦးကချင်လူမျိုးများသည် တိဘက်ကုန်းမြင့်ဒေသ (Tibetan Plateau)၊ ချင်းဟိုင် (Qinghai -青海) ရေအိုင်နှင့် ချန်း(ခေါ်)ယန်စီ (Yangtze - 长江) မြစ်ဖျား ဒေသများတွင် နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ဆားချက်ကာ အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းပြုခဲ့ကြသည်။ လီဆူ၊ တိဘက်နှင့် ဂျိန်းဖော့လူမျိုးများသည် ဆားချက်လုပ်သည့် လူမျိုးများဖြစ်ကာ ချန်းမြစ်ဖျားဒေသမှ စတင်၍ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သွားကြသည့် လူမျိုးများဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ၊ ယူနန် (Yunnan) ပြည်နယ်၊ တလီ (Dali) မြို့ရှိ ရှေးဟောင်း သုသေသနပြတိုက်တွင် ပြသထားသည်။ ကချင်မျိုးနွယ်စုတို့၏ သမိုင်းနောက်ခံတူညီမှုကို ဖော်ညွှန်းသည့် ထင်ရှားသော သက်သေ အထောက်အထား တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သည့် အချိန်ကာလတစ်လျှောက်တွင် မိမိတို့၏ လူမျိုးစုများ ရောက်ရှိနေထိုင်ရာ ဒေသရှိ အသုံးအဆောင်၊ အလှအပအဆင်တန်ဆာများကို သုံးစွဲခဲ့ကြရသည့်အတွက် ဘာသာစကား၊ ရိုးရာဝတ်စုံနှင့် ဆင်ရင်ထုံးဖွဲ့မှုတွင် ကွာခြားမှု အနည်းအကျဉ်းရှိခဲ့သည်။ ဂျိန်းဖော့ရိုးရာဝတ်စုံပင်လျှင် ဗန်းမော်ဝတ်စုံ၊ ခခူးဝတ်စုံစသဖြင့် နေရာဒေသကိုလိုက်၍ ကွဲပြားသည်။ သို့သော် အထက်တွင် ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း တူညီသော ရိုးရာဓလေ့ ထုံးတမ်းများနှင့် ရွှေ့ပြောင်းအခြေချမှုသမိုင်းတို့က ကချင်မျိုးနွယ်စုများကို ပိုင်းခြားခွဲထုတ်၍ မရအောင် အခိုင်အမာ သက်သေခံလျက် ရှိပါသည်။
ထိမ်းမြားလက်ထပ်မှုကိစ္စတွင် ကချင်မျိုးနွယ်စုဝင်များအားလုံး၌ စနစ်တစ်ခုတည်းသာ ရှိသည်။ မည်သည့်မျိုးနွယ်စု၊ မည်သည့်မိသားစုတွင် ပါဝင်သည်ဖြစ်စေ၊ ညီအစ်ကိုမျိုးနွယ် (Hpu Nau) - ယောက္ခမမျိုးနွယ်(Mayu) - သားမက်မျိုးနွယ် (Dama) ဖိုခနောက်ဆိုင် တော်စပ်ပုံစနစ်အရ ဤခေါင်းစဉ် သုံးခုအောက်တွင်သာ ရှိသည့်အတွက် ကချင်အားလုံးမှာ ဆွေမျိုးအရင်းအချာများသာ ဖြစ်ကြသည်။ ဤစနစ်သည် မည်မျှဝေးကွာနေသူများပင် ဖြစ်ပါစေ၊ တစ်သွေးတစ်သား တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း ဖြစ်အောင် ရစ်နှောင်ထားသည့် တွဲလက်များပင် ဖြစ်ပါသည်။
ကချင်မျိုးနွယ်စုဝင်များ၏ တူညီသည့် အခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုကို ညွှန်းဆိုရလျှင် ကချင်မျိုးနွယ်စုများသည် ဖခင်၏မျိုးနွယ်ကို လိုက်၍ အမည်မှည့်ဆိုသောစနစ်ကို အသုံးပြုသည်။ မိခင်၏ မျိုးနွယ်ဖြင့် အမည်မှည့်ဆိုခြင်း မရှိဘဲ၊ ဖခင်၏ မျိုးနွယ်ကိုလိုက်၏ အမည်မှည့်ခေါ်သည့် စနစ် (Patrilineal) ဖြစ်သည်။ ဖခင်သည် လဖိုင် (Lahpai) မျိုးနွယ်ဖြစ်ပါက သား၊ သမီးများသည်လည်း လဖိုင်မျိုးနွယ် ဖြစ်ကြပြီး မိခင်ဘက်မှ မျိုးနွယ်ကို ယောက္ခမမျိုးနွယ်အဖြစ် အလွန်ရိုသေတန်ဖိုးထားကြသည်။ တစ်ဘက်မှလဲ သားမက်မျိုးနွယ်ကို များစွာအားကိုးအားထားပြုကာ ပုံမှန်ဝင်ထွက်သွားလာကြသည်။ ဥပမာဆိုရလျှင် ဖခင်ဖြစ်သူ လောဝ်ဝေါ်ဖြစ်ပါက သားသမီးများသည်လည်း ဖခင်၏ မျိုးနွယ်အမည် ဆက်ခံကာ လောဝ်ဝေါ်လူမျိုးပင် ဖြစ်သည်။ မိမိတို့ ကချင်လူမျိုးတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံကို စိုးစဉ်းမျှ သိရှိနားလည်ခြင်းမရှိပဲ ဂျိန်းဖော့လူမျိုးကြီးဝါဒဟုဆိုကာ မရှက်မရှိ ၀ါဒဖြန့်နေကြသည့် တိုင်းတစ်ပါးသား လူမျိုးခြားတို့၏ ကလိန်စေ့ငြမ်းဆင် လုပ်ဇာတ်များကို နားမယောင်ဖို့ လိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအနက် ကချင်လူမျိုး၌သာ ဤကဲ့သို့သော မျိုးနွယ်အမည် မှည့်ခေါ်သည့်စနစ်(Family Name System) ရှိခြင်းမှာလည်း ကချင်လူမျိုးတို့၏ ထင်ရှားသည့် ၀ိသေသလက္ခဏာပင် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တရုတ်၊ ကိုးရီးယားစသည့် လူမျိုးအချို့တွင်လည်း မျိုးနွယ်အမည် မှည့်ခေါ်ကြသည်။
ကချင်လူမျိုးများ၏ အထင်ရှားဆုံးနှင့် အရေးကြီးဆုံး ယဉ်ကျေးမှု အမှတ်လက္ခဏာမှာ မနောတိုင် (Manau Shadung) နှင့် မနောအက (Manau) ပင် ဖြစ်သည်။ ကချင်မျိုးနွယ်စု ၆ ခုလုံး မနောအက ကကြသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကချင်လူမျိုး (မျိုးနွယ်စု ၆ စု) မှလွှဲ၍ မည်သည့်လူမျိုးမျှ မနောအကကို မကချေ။
မနောအကနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကချင်လူမျိုးများ၏ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တွင် ငှက်မျိုးပေါင်းစုံတို့မှ မနောအကကို စုပေါင်းကာ ကခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။ ဂျပန်၊ ကိုးရီးယားလူမျိုးတို့၏ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များတွင်လည်း ငှက်များ ကခုန်သည့် အကြောင်းအရာများ ပါဝင်သကဲ့သို့ အာရှတိုက်မှ တိုင်းပြည်အချို့တွင် ငှက်များ ကခုန်ပျော်မြူးသည့် အကြောင်းအရာနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ပုံပြင်မူကွဲ အမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း မနောအကယဉ်ကျေးမှုကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးကာ ကသည့် လူမျိုးမှာ ကချင်လူမျိုးသာ ဖြစ်သည့်အတွက် ဤပုံပြင်အမျိုးမျိုး၏ မူရင်းဇစ်မြစ်မှာ ကချင်လူမျိုးတို့၏ မနောအက ပုံပြင်ပင်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေသာဓက ထင်ရှားလျက် ရှိပေသည်။ ငှက်များ ကခုန်နေသည့် ပုံသဏ္ဍာန် ကြေးရုပ်တုကို တရုတ်နိုင်ငံ၊ စီချွမ် (Sichuan -四川) ပြည်နယ်ရှိ Sanxingdui (三星堆) ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေတွင် တူးဖော်ရရှိခဲ့သည်။ မနောအက ပုံပြင်၏ အခိုင်မာဆုံးသော သက်သေတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။
မနောတိုင်တွင် အသုံးပြုသည့် အမှတ်အသားများ၊ လက္ခဏာသင်္ကေတများ၊ ပုံသဏ္ဍာန် (Pattern) များမှာ တရုတ်ပြည်ရှိ မဟာတံတိုင်းကြီး မဆောက်လုပ်မီ အချိန်ကာလမှ စတင်အသုံးပြုခဲ့သည့် လက္ခဏာ ပုံသဏ္ဍာန်များ ဖြစ်သည်။ ယနေ့ကာလတွင် ကချင်လူမျိုးများ သုံးစွဲဝတ်ဆင်နေသည့် ၀တ်စားဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှုသည်လည်း ဘီစီ ၁၉၀၀ နှစ်ကာလများမှ ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှု ပုံစံများဖြစ်သည်။ ကချင်လူမျိုးများ၏ ခေတ်အဆက်ဆက် ၀တ်စားဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှုများကို တရုတ်နိုင်ငံ၊ စီချွမ် (Sichuan - 四川) ပြည်နယ်ရှိ ရှေးဟောင်းသုတေသန ပြတိုက်တွင် ပြသထားသည်။
ကချင်လူမျိုးများ ကိုင်ဆောင်အသုံးပြုလေ့ရှိသော လက်နက်တစ်မျိုးဖြစ်သည့် လေး (Bow) ကို Xiongnu (匈奴) ခေတ်မှ စတင်ကာ ပြုလုပ်သုံးစွဲခဲ့ကြကြောင်း အထောက်အထားများကို တွေ့ရှိရသည်။ လေးလက်နက်ပြုလုပ်ရာတွင် ပိုးစာပင် (Morus) ၏ ပင်မကြောရိုး သစ်သားကိုသာ သုံးစွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဤကဲ့သို့ ပိုးစာပင်၏ ကြောရိုးသစ်သားကို ထုတ်ယူကာ လေးလက်နက်ပြုလုပ်သည့် နည်းလမ်းကို ယနေ့တိုင်အောင် သုံးစွဲနေကြဆဲ ဖြစ်သည်။ ရှေးကာလ ဘိုးဘွားတို့၏ လက်ထက်မှစတင် သုံးစွဲခဲ့သည့် နည်းလမ်းကို ယနေ့ခေတ်ကာလတိုင်အောင် ဆက်လက်သုံးစွဲနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ကချင်လူမျိုးများ၏ တူညီသော အခြားဝိသေသလက္ခဏာတစ်ရပ်မှာ လက်နက်ကိရိယာများကို သွန်းလုပ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ကျောက်စိုင်ကျောက်ခဲများမှ သံကို အရည်ပျော်ရယူကာ လက်နက်ကိရိယာများကို သွန်းလုပ်ကြသည်။ မိမိတို့ ကိုင်ဆောင်အသုံးပြုသည့် လှံ၊ ဓား စသည်တို့ကို ကိုယ်တိုင် သွန်းလုပ်ကြသည်။ အဖျားချွန်သည့် ဓားလက်နက်ကို သုံးစွဲလေ့ သိပ်မရှိ။ အဖျားဘက်တွင် ပြားကာ အနံကျယ်သွားသည့် ဓားများကို ပိုမို သွန်းလုပ် သုံးစွဲကြသည်။
ရိုးရာနတ်ကိုးကွယ်မှုကို အခြေခံသည့် ဓားလှေကားတက်သည့် ဓလေ့ထုံးစံ(Knife-ladder Climbing)သည်လည်း ကချင်မျိုးနွယ်စုဝင်များ၏ တူညီမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ နတ်ဝင်စားသည်နှင့် တပြိုင်နက် အလွန်ထက်သော ဓားများကို လှေကားထစ်အဖြစ် ပြုလုပ်ထားသော လှေကားပေါ်သို့ ပြေးတက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကူမင်း(Kunming -昆明)ဒေသမှ လီဆူလူမျိုးများသည် ဓားလှေကားတက်သည့် ဓလေ့ထုံးစံကို ယနေ့တိုင်အောင် ကျင့်သုံးနေဆဲ ဖြစ်သည်။ ကချင်မျိုးနွယ်စုဝင်များအားလုံးသည် ဓားလှေကားတက်ခြင်း ဓလေ့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြကာ ဤအချက်သည်လည်း ငြင်းဆိုမရနိုင်သည့် တူညီချက်တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။
ကချင်လူမျိုးတို့၏ ရိုးရာတူရိယာတစ်မျိုးဖြစ်သည့် ကျောက်စိမ်း Htu-Ren (Single-hole stone flute)ကိုလည်း တရုတ်နိုင်ငံတွင် တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်း Htu-ren တူရိယာမှာ လွန်ခဲ့သည့် သက်တမ်းအားဖြင့် နှစ်ပေါင်း (၇၀၀၀)ကျော် ကြာမြင့်ကြောင်းလည်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသည်။ Htu-ren တီးမှုတ်သည့် သမိုင်းသာဓကများကို အခြေခံကာ ဤ Htu-ren တူရိယာသည် ရှေးခေတ်ကချင်လူမျိုးများ၏ အသုံးအဆာင်တူရိယာဖြစ်ကြောင်း ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင် Duwa Manam Tawng (Li Xiangqian)မှ တင်ပြ အတည်ပြုချက်ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ရုပ်မြင်သံကြား(CCTV-4)မှ Duwa Manam Tawng ကို မေးမြန်း တင်ဆက်ခဲ့သည်။ ကချင်လူမျိုးများသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း(၇၀၀၀)ကျော်မှစ၍ ကျောက်စိမ်းကို ထွင်းဖောက်ကာ ဂီတတူရိယာ ပြုလုပ်သုံးစွဲနိုင်ခဲ့ကြောင်းကို ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုက သက်သေထူလျက် ရှိသည်။
ကချင်ရိုးရာအထိမ်းအမှတ် လက္ခဏာများ ပါဝင်သည့် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများသည် တူးဖော်တွေ့ရှိရသမျှ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများအနက် သက်တမ်းအရင့်ဆုံးစာရင်းတွင် ပါဝင်သည်ဖြစ်ရာ ကချင်လူမျိုးတို့အတွက် ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစရာပင် ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်က ကချင်လူမျိုးများကို အရိုင်းအစိုင်းများ (Aborigines) အဖြစ် အထင်အမြင်သေးခဲ့သူများပင်လျှင် မိမိတို့၏ အမှားကို သဘောပေါက်ကာ ယခုအခါ ကချင်လူမျိုးများအပါ် အထင်မသေးဝံ့တော့ဘဲ တလေးတစား ဆက်ဆံလာကြရသည်။ ဤသို့ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကို တူးဖော်တွေ့ရှိသည့်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံကလဲ မိမိနိုင်ငံတွင် တူးဖော်တွေ့ရှိသည့် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအဖြစ် တမြတ်တနိုးတန်းဖိုးထားကာ ကမ္ဘာအနှံ့မှ ကချင်လူမျိုးများ တွေ့ဆုံကြသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မန်ရှီ(Mangshi) မနောပွဲကြီးတွင် အသိအမှတ်ပြု၊ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ကချင်လူမျိုး အားလုံးအတွက် အလွန်ဂုဏ်ယူစရာ ကိစ္စရပ်ကြီးပင် ဖြစ်ပေသည်။
(‘ကချင်တွေကို စာသင်မယ့်အစား ခွေးကို စာသင်ပေးတာကမှ ပိုတတ်အုံးမယ်’ဟု ကချင်လူမျိုးများအား လာရောက်သာသနာပြုသည့် ခရစ်ယာန်သာသနာပြုဆရာများအား ဗမာဘုရင် မင်းတုန်းမင်းမှ ပြောဆိုကာ ကချင်လူမျိုးကို စော်ကားခဲ့ဖူးသည်။)
ကချင်လူမျိုးတို့သည် စစ်ရေးစစ်ရာတွင် တစ်ဘက်ကမ်းခတ် ကျွမ်းကျင်သူများ ဖြစ်ကြောင်းကိုလဲ သမိုင်းမှတ်တမ်းများက သက်သေခံလျက်ရှိသည်။ ကချင်ဒေသသို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက် လာသော အင်္ဂလိပ်တပ်များကို ရှေးဦးစွာခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့သူမှာ လီဆူမျိုးနွယ်စုဝင် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် Leme Ta Hpa ဆိုသူဖြစ်သည်။ ချီဆွေ၊ ဆော်လော်ဒေသမှ တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်မှာ Langlaw Myaw Hkawng Dai ဆိုသူဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်တပ်များကို အကြိမ်ကြိမ်တွန်းလှန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့အတွက် နောက်ဆုံးတွင် အင်္ဂလိပ်တပ်မှ စစ်ပြေငြိမ်းရေးအတွက် ပန်ကြားခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။ ကချင်လူမျိုး တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များ၏ ပြည်ပအကူအညီမယူဘဲ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ခဲ့ ပုံများမှာ အောက်ပြည် အောက်သားတို့အတွက် စံနမူနာယူစရာ ကောင်းလှသည်။
ဤကဲ့သို့ ကချင်ခေါင်းဆောင်များ၏ လက်ရုံးရည်၊ နှလုံးရည်ထက်မြက်မှုကြောင့် ကချင်ပြည်သူ လူထုမှာ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့၏ ခေါင်းပုံဖြတ်အနိုင်ကျင့်မှုကို အောက်ပြည်မှ အခြားဒေသများကဲ့သို့ မခံရဘဲ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ပြဌာန်းခွင့်အပြည့်ဖြင့် အေးချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကချင်လူထုမှာ အင်္ဂလိပ်တို့ ရောက်ရှိအုပ်ချုပ်နေမှန်းပင် မသိရှိခဲ့ပေ။
ဖက်ဆစ်ဂျပန်တပ်များကို ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ် (BIA) က ပြည်တွင်းသို့ ကျူးကျော် ခေါ်ဝင်လာစဉ်ကလဲ ကချင် (ရ၀မ်) လူငယ်များနှင့် ခခူးဒေသမှ ကချင် (ဂျိန်းဖော့) လူငယ်များက Kachin Levies တပ်အဖြစ် ခုခံတွန်းလှန်ခဲ့ကြသည်။ Northern Kachin Levies တပ်များ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင်း ပူတာအိုဒေသသို့ မ၀င်ရောက်နိုင်ဘဲ ပြန်ပြေးဆင်းလာသော ဂျပန်တပ်များကို မြစ်အရှေ့ခြမ်းမှ Kachin Rangers တပ်များက ထပ်မံ၍ နှိမ်နှင်းတိုက်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ကချင်မျိုးနွယ်စုဝင်များ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရလာဒ်ပင် ဖြစ်သည်။
ကချင်တပ်များ၏ တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်းမှုကြောင့် တပ်ပျက်ကာ ကစဉ့်ကလျားဆုတ်ခွာလာသော ဂျပန်တပ်များကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်သော ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ် (BIA) က အခက်အခဲမရှိ တိုက်ခိုက်လိုက်နိုင်သည့်အတွက် ဗမာပြည်နှင့် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်၏ နေ့ထူးနေ့မြတ်အဖြစ် ယနေ့တိုင် တသသ ဖြစ်နေကြဆဲဖြစ်သည်။
ကချင်မြေပေါ်မှ ဖက်ဆစ်ဂျပန်များကို တိုက်ထုတ်လိုက်သည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အောင်ပွဲခံ မနောပွဲ (Padang Manau) ကို ၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၄-၂၆) တွင် ဗန်းမော်မြို့အနီး စင်လုံကဘာရွာတွင် Kachin Rangers တပ်က ဦးဆောင်၍ ချိမ့်ချိမ့်သဲ ကျင်းပခဲ့သည်။ နောက်တစ်ရက် မတ်လ (၂၇) ရက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်သော ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်ကလဲ စစ်နိုင်နေသော ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု ဘက်သို့ ပြေးကပ်ပြီး အချိန်မီဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်ခဲ့ကြသည်ဖြစ်ရာ ဂျပန်တပ်များ လက်နက်ချသည်အထိ အချိန် ၂ လ၊ ၃ လခန့်သာ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
နယ်ချဲ့တပ်များ ကျူးကျော်လာချိန်တွင် ကချင်ဒေသကို ကချင်မျိုးနွယ်စုများ လက်တွဲပြီး ခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြသည့်အတွက် အိန္ဒိယမှတဆင့် ဥရောပသို့ ချီတက်ရန် ရည်မှန်းထားသော ဂျပန်တို့၏ အကြံအစည် ပျက်ပြားခဲ့ပြီး ကချင်လူထု၏ သွေးစည်းမှုနှင့် ကချင်တပ်များ၏ စွမ်းရည်မှာ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွင် အရေးကြီးသော အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်များအား ကချင်လူမျိုးများသာ တားဆီးတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါက ဖက်ဆစ်နှင့် နာဇီတို့ ပေါင်းမိသွားကာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းသည်လည်း တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ ကချင်မျိုးနွယ်စုများ၏ သွေးစည်း ညီညွတ်မှုဖြင့် ကမ္ဘာ့သမိုင်းကို ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုရပေမည်။
ဤသို့ ကချင်မျိုးနွယ်စုတို့သည် ဘာသာစကားနှင့် နေထိုင်ရာဒေသကွဲပြားကြသော်လည်း တစ်ခုတည်းသော ရာဇ၀င်၊ တစ်ခုတည်းသော ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုသမိုင်း၊ တစ်ခုတည်းသော ယဉ်ကျေးမှု ထုံးတမ်းအစဉ်အလာတို့ဖြင့် သွေးရောယှက်တင်နေထိုင်ကာ ထူးခြားသောဝိသေသများဖြင့် ပြည့်စုံသည့် လူမျိုးတစ်ရပ်အဖြစ် ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်လျက်ရှိပါသည်။ အစစအရာရာ ကွဲပြားသော လူမျိုးများကို လက်နက်ပြပြီး လူမျိုးတစ်ခုတည်းဖြစ်သယောင် ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် အရှက်မရှိ စုစည်းထားခြင်း မျိုးမဟုတ်ဘဲ အမှန်တရားနှင့် ညီအစ်ကိုရင်းတို့၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ် အခြေခံသည့် လူမျိုးတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။
တိုင်းတစ်ပါးသား လူမျိုးခြားတို့၏ ယုတ်မာကောက်ကျစ် သွေးခွဲသပ်လျှိုမှုကို လိမ္မာပါးနပ်စွာ ရှောင်တိမ်းပြီး ကချင်မျိုးနွယ်စုဝင်အချင်းချင်း၏ သွေးစည်ချစ်ကြည်မှုကို တည်ဆောက်လျက် မိမိကိုယ်ကို ကချင် ဟု ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာ ဖွင့်ဆိုမွက်ဟရမည့်အချိန် ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
[One Kachin Magazine 2013 တွင်ဖော်ပြပြီးဖြစ်သော Chyu Rum Ai Wunpawng Myu Sha Ni (Shing N Rai) One Kachin ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ဆို ဖြည့်စွက်ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။]
Credit to original writer)
Ningtsa Pyen Langji
Jinghpaw HtungHking Shachyen Shaga Ai Lam. Daw (1) kaw na (5) du hkra
at 11/10/2017 11:47:00 AM
Jianghpaw Wunpawng Myu Sha Ni (Ya Na Ramma Nnan Ni )
Ti Nang A Htunghkring Shachyen Shaga Ai Lam Hpe Grau Na Chyehkrawn Wa Mu Ga Ngu
Yawshda Let Hpushawng Kanu Kawa Ni Ka Lajang Da Ai "
"Jinghpaw Wunpawng Htunghkring Hte Maumwi Mausa Shachyen Shaga Laika Buk "" Kaw Nna Bai Kahtap Mara Dat Ai Re.
at 11/10/2017 11:36:00 AM
SHATAPRU POST MEDIA·TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2017
(Kareng Bawm Awn)
ကချင်နှင့် မြေပြန့် ဘာဆိုင်လို့လည်းဟု ဗမာမိတ်ဆွေတချို့ကပြောလာကြ၏။ မှန်၏။ ကချင်ဒေသ အောက် ပိုင်း၊ ဗမာမိတ်ဆွေများနေထိုင်သော ဗမာလူမျိုးများပိုင် မြေပြန့်ဒေသသည် ယခင်ကာလာတွင် ကချင် လူမျိုး များ နှင့် မည်သို့မျှမသက်ဆိုင်ချေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသောဗမာပြည်ထောင်နှင့်ကချင်ပြည်ထောင်ဟူ၍သတ်သတ် စီရှိခဲ့ခြင်း ကြောင့်ပင်ဖြစ်၏။ ဗမာမင်းပိုင်နက် အဝေးဆုံးဖြစ်သော မဲဇာ၊ ကချင်အ မည် ( Myen Za) လွန် သည်နှင့် တောင်တန်း များသာဖြစ်၏။
ကချင်လူမျိုးတို့၏မူလည်အမည်သည် ဂျိန်းဖေါဖြစ်၏။ ကချင်ဟူသောအမည်သည် Kakhyen ဟူသောအမည်မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆို၏။ အာသံဒေသရှိ ဂျိန်းဖေါများအားဆိန်းဖေါဟုခေါ်ဝေါ်ကြ၏။ ဂျိန်းဖေါ (သို့ ) ဆိန်းဖေါ များအား ဗမာမိတ်ဆွေများက သိန်းဖေါ ဟုခေါ်ကြ၏။ ဗမာ လူမျိုးများ၏ ဆ နှင့် သ အသံ ထွက် ပြောင်းပြန်ဖြစ်ခြင်း ကြောင့် ပင်ဖြစ်၏။ ယခင်က တရုတ်လူမျိုးများသည် ကချင်များအား ရှန်ထို ဟုခေါ်၏။ ၄င်း အဓိပါယ်မှာ တောင်ပေါ်သား ဖြစ်သည်ဟုဆို၏။ နောက်ပိုင်း ဂျိန်းဖေါဆူ ဟုခေါ်၏။ ဂျိန်းဖေါ လူမျိုးဟု အဓိပါယ် ရှိသည်ဆို၏။
ဗြိတိသျှတို့၏ မှည့်ခေါ်မှုမှာ တမူထူးခြား၏။ Lords of Mountains တောင်တန်းများ၏အ ရှင်သ ခင်များ ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ မှည့်ခေါ်ခြင်းအား ကချင်လူမျိုးများကိုယ်တိုင် ကြိုက်နှစ် သက်ကြသည်သာ မက အထူးပင်ဂုဏ်ယူလျက်ရှိသည်။ မည်သည့်အတွက် ကြောင့် ကချင်လူမျိုးများသည် ၄င်းအမည်အား ဂုဏ်ယူကြသနည်းဟု ဆိုရာတွင် အကြောင်းရင်းရှိလေသည်။ ကချင်လူမျိုးများသည် တောင်ပေါ်ဒေသတွင်သာ အနေများသဖြင့်ဖြစ်ပြန်၏။ ထို့ထက်သာမက ကချင်ဒေသသည် တောင်ကုန်း တောင်တန်းများဖြင့် ပြည့် နေသော နေရာဖြစ်၏။ မြေပြန့်ဟူ၍ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပင်မရှိနိုင်ချေ။
ယင်းသို့ဖြင့် ယခင်ကာလဗမာလူမျိုးများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ဗြိတိသျှ တို့ထံမှ လွတ်လပ်ရေးမရယူမီအချိန်အထိ ကချင် လူမျိုးများ တောင်ပေါ်တွင် နေထိုင်ကာ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်း နှင့်နေလာခဲ့ကြရာ မည်သည့်ပြ သနာမျှ မရှိခဲ့ချေ။ ဒေသအပိုင်းအခြားများဖြင့် ကချင်ပဒေသရာဇ်ဒူဝါများ၊ အကြီးအကဲများ၏ အုပ်ချုပ်မှုဖြင့် မိမိတို့နယ်မြေဒေသများအား မိမိတို့အုပ်ချုပ်ကာနေခဲ့ကြသည်။ဗြိတိသျှတို့မရောက်လာမီအချိန်တွင်ကချင်ဒူဝါများသည်ကြွင်းမဲ့အာဏာတန်ခိုးဖြင့်ပြည့်စုံကြ၏။ မည်သည့်ဗမာမင်း၊တရုတ်မင်း၊ကုလားမင်းမျှ ကချင်ဒူဝါ များ ၏အာဏာစက်အား ထိပါးနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ကြ ချေ။
သို့သော်လည်း ဘားမားဖယ်ဒရေးရှင်းတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် စကားတစ်ရပ်ပေါ်ထွက်လာ၏။ ၄င်းစကားရပ်မှာ `` ကချင်နဲ့မြေပြန့်ဘာဆိုင်လို့လည်း´´ ဟူ၍ဖြစ်၏။ ဘားမားဖယ်ဒရေးရှင်းတွင် မပါဝင်မီအချိန်အထိ မည်သည့်လူမျိုးခြားကမှ ကချင်နဲ့ မြေပြန့်ဘာဆိုင်လို့လည်း ဟူသောစကားပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့၊ ပြောဆိုရန်အ ကြောင်း လည်းမရှိ။
ဘားမားဖယ်ဒရေးရှင်းတည်ထောင်ရန်ဆောင်ရွက်စဉ် ဗြိတိသျှတို့က ကချင်၊ ရှမ်း၊ ချင်း စသည့် ဒေသများအား Frontier area ( နယ်ခြားဒေသ) ဟုအမည်ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေး ရယူရာတွင် ကချင်ဒေသအား Kachin State ဟူသောအမည်ဖြင့်သာ ဗမာနှင့် ပူးပေါင်းခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ဗမာများက ဗမာစကားဖြင့် တောင်တန်းဒေသဟု အမည်ပေးခဲ့ကြသည်။ ယင်းကဲ့သို့အမည်ပေးခြင်းအား ဆန်းစစ်ကြည့်လျင် နဂိုကတည်းက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် ၄င်းတို့ကမြေပြန့်သား၊ အခြားများက တောင်ပေါ်သား ဟူ၍ ခွဲခြားလိုသော အဓိပါယ်ပင်ဖြစ်နေ တော့သည်။ မြေပြန့်သားများက တောင်ပေါ်သားများထက်ပို၍ မြင့်မြတ်သလို၊ မြေပြန့်သားများက ဘဲ တောင်ပေါ်သား များ၏ အရှင်သခင်ဖြစ်သလိုလို ဖြစ်လာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် မှည့်ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်မှာ သံသယဖြစ်စရာ အကြောင်းမရှိ။
တောင်ပေါ်များတွင် နေထိုင်သော ကချင်များကလည်း မိမိတို့ ပင်ကိုယ်နေထိုင်လိုစိတ်ဖြင့် နေထိုင်ခြင်းဖြစ် သောကြောင့် မည်သို့မျှ အကြောင်းမရှိ၊ သို့သော် ဘားမားဖယ်ဒရေးရှင်းတွင်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် တောင်တန်းသား များဟူ သော အမည်နာမအောက်တွင် နိမ့်ကျသလိုလိူ၊ မတူသလို၊ မတန်သလိုပြုမူခြင်းခံကြရတော့သည်။
ကချင်၊ ချင်း၊ ရှမ်းတို့သည်လည်း ၄င်းတို့ကိုယ်တိုင်တောင်တန်းများတွင်နေထိုင်ကာ မူ မိမိပြည်ထောင်၊ နိုင်ငံ၊ တိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသတ်မှတ်ကြသည်။ ကမ္ဘာကြီးတွင် တောင်တန်းများတွင်နေထိုင်ကြသောလူမျိုး အမြောက်အများရှိကြသည်။ တိဘက်ပြည်၊ မွန်ဂိုးလီးယားပြည်၊ နီပေါ၊ ဘူတန်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဘိုလီးဘီးယား၊ အစရှိသဖြင့် မြောက်များစွာရှိသည်။ တောင်တန်းများပေါ်တွင်နေထိုင်ခြင်းဖြင့် မည်သမျှ တောင်တန်းသားဟူ၍ပြောဆိုခြင်းမရှိ၊ သူတို့တိုင်းပြည်နှင့် သူတို့ တည်ရှိနေကြသည်။ ကုလသမဂ္ဂမှလည်းခွဲခြားခြင်းမရှိ၊ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး၊ တစ်ပြည် ထောင်နှင့်တစ်ပြည်ထောင် လေးစားသမှုပြုကာနေထိုင်ကြသည်။
တောင်တန်းသားများဖြစ်သဖြင့် မည်သူ့နေရာကိုမျှလိုချင်တပ်မက်ခြင်းမရှိ၊ မိမိတို့ဒေသတွင် မိမိတို့နှင့်သက် ဆိုင်သော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကာအသက်ရှင်နေထိုင်ကြသည်။ မိမိတို့ပဒေသရဇ်ာဒူဝါများ၏ အုပ်ချုပ်မှု၊ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကချင်ပိုဒေသများအား တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ မိမိတို့တိုင်းနိုင်ငံအားတည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် လည်း ကချင်နဲ့မြေပြန့်ဘာဆိုင်လို့လည်းဟု အမည်ကင်ပွန်းတပ်ကာ ကချင်လူမျိုးအားမား တောင်ပေါ်ဒေ သသို့ပြန်လည် နှင်ထုတ်ပစ် ဟူသော စကားသံများအား မကြားချင်အဆုံးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယင်းသို့ပြောဆိုမှုများသည် သမိုင်းကြောင်း အားမလေ့လာဘဲ လေဖမ်းတရားနာပြုသူများ၏စကား သံပင်ဖြစ်လေတော့သည်။
ကချင်လူမျိုးများသည် ယခင်ရာစုနှစ်များစွာကတည်းက၊ အချိန်တိုင်းပင် စစ်မက်တိုက်ခိုက်ကာနေခဲ့ကြသော လူမျိုးဖြစ်သည်ကို သမိုင်းများစွာတွင သက်သေအဖြစ်တွေ့ရသည်။ ပထမဆုံး သမိုင်းတွင်သည်မှာ နန်းစော ( Nan Chao) သမိုင်းတွင်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အေဒီ ၇-၈ ရာစုများတွင် နန်ချောင် များသည် တရုတ်ပြည်၊ ယနေ့မြန်မာပြည်ဟုခေါ်တွင်နေသောဒေသများ အပြင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအထိသိမ်းပိုက်စိုးမိုးခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင် ( Hanoi) အထိ သွားရောက်တိုက်ခိုက်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း GE Harvey ၏ History of Burma အမည်ရှိစာအုပ်တွင်ရေးသားထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ၄င်း၏သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်မှုသည် သေချာသည်ဟု မှတ်ယူရန်ရှိသည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော ယနေ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ တောင်ပေါ်ဒေသများတွင် နေထိုင်သော Thenbaw, Mnong, Ede လူမျိုးများ၏ ဓလေ့ထုံးစံ၊ နေထိုမှုရိုးရာ၊ နေအိမ်တည်ဆောက်ထားပုံ၊ ရိုးရာ နတ်ကိုးကွယ်ပူဇော်ပသမှု များတွင် ကျင့်ဆောင်သော အပြုအမှု များသည် ကချင်လူမျိုးများနှင့် ထပ်တူနီးပါးမျှ ဆင်တူဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ထို့ပြင် ကချင်လူမျိုးများသည် မွန်ဂိုတာတာ အနွယ်ဝင်ဖြစ်သည့်အတိုင်း မွန်ဂိုတာတာ ဘုန်းမီးနေလ တောက်ပြောင်သော အချိန်တွင်လည်း မွန်ဂိုစစ်တပ်နှင့်အတူ အာရှ တခွင် တွင် စစ်မက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ မွန်ဂိုအနွယ်ဟုဆိုရာတွင် ကချင်များကဲ့သို့သော အခြားမျိုးနွယ်များ မည်မျှ ပါဝင်ခဲ့သည်ကိုမူ အသေအချာ မသိရချေ။ သို့သော်မြောက်များ ပါဝင်မည်ကား အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်က ရှေ့မီနောက်မီ လူကြီးများ ပြောသောစကားတွင် တရုတ်ပြည်ရှိ မဟာတံတိုင်းကြီး တည်ဆောက်ခြင်းသည် ဂျိန်းဖေါ လူမျိုးများ၏ ရန်ကိုကြောက်ရွံ့သဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ရန် အတွက် တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသဖြင့် အလွန်အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူဥိးရေအများဆုံးနှင် ဧရိယာအကျယ်ဆုံးသော တရုတ်လူမျိုးများသည် ကချင်လူမျိုးများအား ကြောက်ရွံ့သဖြင့် မဟာတံတိုင်းကြီးတည် ဆောက်ခဲ့သည်ဆိုသည်ကို ရယ်စရာ ဟာသတစ်ပုဒ်၊ ရယ်ဖွယ်ရာ ဇတ်လမ်းတစ်ပုဒ်အဖြစ်လှောင်ပြောင်ခဲ့ဘူးသည်။ ယခုအချိန်ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရာတွင် ထိုအချိန် ကချင်အမည်မရှိသေးသော၊ ဂျိန်းဖေါလူမျိုးများသည် မွန်ဂိုတာတာ အနွယ်ဝင်များဖြစ်ကြပြီး ၄င်းတပ်တွင်ပါဝင်ကာ တရုတ်ဒေသအားတိုက်ခိုက်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ကချင်လူမျိုး များ၏ဓလေ့ထုံးစံအတိုင်းနှုတ်စကားသမိုင်း အားဖြင့် တဆင့်ပြီးတဆင့်၊ လက်ဆင့်ကမ်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကို နောက်ပိုင်းတွင် သံသယဖြစ်စရာမရှိတော့ချေ။
ကချင်လူမျိုးများသည် မွန်ဂိုတာတာစပ်တပ်တွင် အပါအ၀င်ဖြစ်ကာ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ပုဂံဒေသ အထိ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသော မွန်ဂိုစစ်တပ်တွင် ကချင်များပါဝင်သည်ကို ကချင်များ၏ နှုတ်ပြောသမိုင်းများတွင် မကြာခဏ ကြားဖူးခဲ့ရသည်။ သမိုင်းဆရာ GJ Scott ကမူ The Kachins were no doubt of Mongol Ancestral ဟုရေး သားထား လေသည်။ ထို့ပြင်ကချင်များသည် War like people ဟုလည်းကောင်း၊ Kachins were the first class warrior ဟုလည်းကောင်းရေးသားထားပြန်သည်။ အမှန်တကယ် စစ်မက်ခုန်မင်ခြင်းရှိမရှိကိုမူ မသိရသော်လည်း လိုအပ်ချက်အရ စစ်တိုက်ခဲ့ကြသဖြင့် အချိန်နှင့်အမျှ စစ်တိုက်နေကြသဖြင့် ပထမတန်းစားစစ်သည်များ ဖြစ်လာရ သည်ကိုတော့ ငြင်းဆိုစရာအကြောင်းမရှိ။
ယနေ့အချိန်အထိကချင်လူမျိုးများ၏လူဦးရေစာရင်းကိုကြည့်မည်ဆိုလျင်တစ်သန်းမျှသာရှိလေသည်။ လူဦးရေ နည်းပါလင့်ကစား ကချင်လူမျိုးများ၏ တိုက်ခိုက်မှုစွမ်းရည်သည် ကမ္ဘာကပင်သြချခဲ့ရသည်။ အထူးသဖြင့် ပထမကမ္ဘာ စစ်နှင့် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် များတွင် ကချင်လူမျိုးများသည် မဟာမိတ်များဖက်မှ ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသော ကချင်စစ်သည် များသည် ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ကြလေသည်။
လူဦးရေ နည်းပါးသည်ကတစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ရန် အအချိန်နှင့်အမျှ စစ်တိုက်နေရခြင်း၊ ခုခံနေရခြင်း များပြုလုပ်နေရသည်ကတစ်ကြောင်း၊ တို့ကြောင့် မိမိတို့ နေထိုင်ရာ နေရာဒေသကိုလည်း ရွေး ချယ်မှုပြုလာရတော့သည်။ စစ်မက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဆိုရာတွင် ယနေ့တိုင်မရိုးနိုင်သော ဗျူဟာတစ်ရပ်မှာ အမြင့်ပိုင်း ( သို့) တောင်ပေါ် တောင်စောင်းများတွင် နေရာယူထားသောသူများသည် တစ်ပန်းသာသည်ဟူ၍ ဖြစ်ရာ ကချင်များသည်လည်း မိမိတို့နေထိုင်ရော ဒေသအား တောင်ပေါ် တောင်းစောင်း၊ တောင်တန်းများတွင် နေရာ ယူခဲ့ရတော့သည်။
မြေနေရာအကျယ်အ၀န်း လိုချင်သလောက်ရှိလင့်ကစား ၄င်းတို့နေထိုင်သော အိမ်များကိုလည်း လုံးချင်းခြံဝင်; နေအိမ်များကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ အိမ်တန်းရှည်များအဖြစ်တည်ဆောက်လာကြသည်။ အိမ်တန်းရှည်ဟုဆိုရ သော်လည်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ခံတပ်များကဲ့သို့ ဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ထားကြသည်။ အိမ်တမ်းရှည်တစ်ခုသည် ကိုက်တစ်ရာခန့် မျှပင်ရှည်လျားလှသည်။ ၄င်းအိမ်တန်းရှည်တစ်ခုတွင် အနည်းဆုံး မိသားစု ဆယ်စုမက နေထိုင်နိုင်ကြသည်ဖြစ်လေရာ စစ်တန်းလျားတစ်ခုပင်ဖြစ်နေတော့သည်။
အကာအကွယ်ကောင်းသော တောင်စောင်းများတွင် တည်ဆောက်ထားကြပြီး ရန်သူများဝင်ရောက်လာနိုင်သောလမ်းကြောင်းများတွင်လည်း ခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ရန် ကတုတ်ကျင်းများ အခိုင်အမာတူး ထားခြင်း၊ တောင်စောင်းများတွင် သစ်သားသစ်လုံးများ၊ ၀ါးလုံးဝါးခြမ်းများဖြင့် ပုခက်သဏ္ဍာန်ပြုလုပ်ကာ ကျောက်တုံး များတင်ထားကြသည်။ ရန်သူများဝင်ရောက်လာသောအခါ ၄င်းကျောက်မောင်းများအား ချည်နှောင်ထားသည့် ဆိုင်းကြိုးများအား ဖြတ်ချခြင်း ဖြင့်ခုခံတိုက်ခိုက်ကြသည်။ လှံလေးများဖြင့် တိုက်ခိုက်ခြင်းများပြုလုပ်ကြသည်။ ယင်းကဲ့ သို့ စုစုစည်းစည်း နေထိုင်ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ရန်သူအားတိုက်ခိုက်ရာတွင် တစ်ခဏအတွင်း အင်အားစုမိခြင်းဖြစ် စေသည်။ ထို့ကြောင့် တောင်ပေါ် တောင်စောင်းများ တွင် အိမ်တန်းရှည်များဆောက်လုပ်ကာနေထိုင်ခြင်းသည် နေထိုင်စရာမြေ နေရာမရှိသဖြင့်မဟုတ်ဘဲ အင်အား တစ်စုတစည်းတည်းဖြစ်ရန်အတွက် နှင့် ရန်သူအား အပေါ်စီးမှ တိုက်ခိုက်ခြင်း ပြုနိုင်ရန် အတွက်ပင်ဖြစ်လေသည်။
ဗြိတိသျှတို့သည် ဗမာဒေသအားသိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ကချင်ဒေသကိုလည်းဆက်လက်သိမ်းပိုက်ရန် ချီတက်လာ ကြရာတွင် ကချင်များ၏ တိုက်ခိုက်မှုအား အကြီးအကျယ်ခံခဲ့ကြရသည်။ ဗမာဒေသအား တိုက်ခိုက်ရာတွင် လအနည်း ငယ်အ တွင်း ပြီးဆုံးသော်လည်း ကချင်ဒေသအားတိုက်ခိုက်ရာတွင်မူ နှစ်ဆယ်ချီကြာမြင့်သည်ကို ဗြိတိသျှ တို့ကိုယ်တိုင် ၀န်ခံခဲ့ရလေသည်။ အံ့အားသင့်ခဲ့ရလေသည်။
ကချင်ဒေသသို့ ချီတက်တိုက်ခိုက်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် ဗြိတိသျှစစ်ဗိုလ် Major SCF Peille ကျြံတွေ့ခဲ့ရသည့် အတွေ့အကြုံတစ်ခုအား အောက်ပါအတိုင်း မှတ်တမ်းတင်ထား လေသည်။ ကချင်တို့၏ အိမ်တစ်ဆောင်မှာ မိသားစုတစ်ခုတည်းနေထိုင်သည့် အိမ်မဟုတ်ဘဲ မိသားစု အများအပြားနေ ထိုင်နိုင် သည့် အိမ်ဖြစ်ပေသည်။ အိမ်ခြေများအနက် တစ်ဝက်သည် တိုက်ခိုက်ပုန်ကန်လှုပ်ရှားမှုပြုရာတွင် ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ပါဝင်ပြီး ကျန်တစ်ဝက်မျာ အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြခြင်းဖြစ်လေသည်။ ( ဦးတင်မောင်ရင်၊ မဟာဝိဇာ၊ ခေတ်မြန်မာတည်ဟန်)
ထို့အပြင်ကချင်အိမ်များသည် ဒါးလှံများ မဖေါက်နိုင်သည်သာမက တူမီးကျည်ဆံပင် မဖေါက်နိုင်အောင် ထူထဲစွာယက်လုပ်ထားကြလေသည်။ တော်တောင်သဘာဝအတိုင်း သားရဲ တိရစ္ဆာန်များ၊ တောကောင်များ ချဉ်းကပ် ရန်မူလာတတ်ရာ ကျား၊ ၀က်ဝံ အစွယ်များဖြင့်ကုတ်ခြစ်ခွာဖြဲမရအောင်ပင်ခိုင်ခံ့သည်။ ရွာပတ်လည်ကိုလည်း သစ်လုံး၊ ၀ါးလုံး၊ ပျဉ်ချပ်ကြီးများဖြင့် ကာရံထားလေသည်။
ရှေးယခင်ကာလက တဆိုက်ခိုက်မှုများသည်ဓါးလှံ၊လက်နက်များဖြင့်သာတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်လေရာ တောင်စောင်း တောင်ပေါ် များသည် လူများအလွယ်တကူ တက်ရောက်နိုင်သည့် နေရာမဟုတ်သောကြောင့် ရန်သူများအလွယ်တကူ တက်ရောက်ခြင်းမရှိနိုင်သောနေရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကချင်လူမျိုးများသည် မိမိတို့၌ လူဥိးရေ နည်းပါးသောကြောင့် ရန်သူအားတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ရန်မှာမူတောင်ပေါ်၊တောင်စောင်းများကသာလျင်သဘာဝကပေးထားသော ခံတပ်အတား အဆီးကြီးဖြစ်နေသဖြင့် ၄င်းနေရာများတွင် နေထိုင်ရန် ပြုလုပ်လာ ကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ကချင်လူမျိုးများထံသို့ သာသနာပြုရန်ရောက်ရှိလာသော ဆရာတော် Dr. A. Gustav ၏မှတ်ချက်မှာ လည်းမှတ်သားလောက်ပေသည်။ " The Kachin mountain villages were more secure and could be defended from marauders more easily." ( Light in the jungle . By Gustaf A Sword, DD.pp-32) ဆိုလိုသည်မှာ တောင်ပေါ် တောင်စောင်းများရှိ ကချင်ကျေးရွာများသည် ပိုမို၍ လုံခြုံသည်သာမက အခြားသော ကျူးကျော်သူများကိုလည်း ထိရောက်စွာခုခံတိုက်ထုတ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူသောနေရာဖြစ်သည်ဟူ၏။ ထိုသို့သော အကြောင်းများကြောင့် လွန်ခဲ့သောအချိန်များတွင် ကချင်လူမျိုးများသည် တောင်ပေါ်တွင် အခြေချနေထိုင်မှု များဖြစ် ပေါ်လာခဲ့ရသည်။ သို့ဖြင့် ကချင်လူမျိုးများသည် တောင်ပေါ်၊ တောင်တန်း၊ တောင်စောင်းများတွင် နေထိုင်ရန်အတွက် အခြေအနေပေးမှုများဖြစ်လာခဲ့ရသည်။
ယင်းသို့ တောင်ပေါ်တွင် အနေများသဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင်လည်း တောင်ပေါ်တွင်သာ အဓိက နေထိုငိကြရာ၊ ဘားမားဖယ်ဒရေးရှင်း တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက်၊ ဗမာလူမျိုးများက ကချင်နဲ့မြေပြန့်ဘာဆိုင်လို့လည်း ဟူပြီး ပြောဆိုလာကြလေတော့သည်။ ကချင်နှင့်မြေပြန့်မသက်ဆိုင်သလို အမျိုးမျိုးသော ၀ါဒဖြန့်မှုများပြုလုပ်လာ ကြတော့ သည်။ အထက်တွင် ရေးသားသည့်အတိုင်း တောင်ပေါ်တွင်နေထိုင်ခြင်းသည် ရန်သူအား ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွင် အပေါ်စီး၊ အသာစီး ရရန်အတွက် နေထိုင်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း၊ ကချင်ဒေသရှိမြေပြန့်များအားလုံးသည် ကချင်ဒူဝ်များ ပိုင်ဆိုင်သော မြေနေရာများဖြစ်လေသည်။ ၄င်းမြေနေရာတွင် နေထိုင်ကြကုန်သော ဝေနေယျလူသတ္တ၀ါအပါင်းသည် ၄င်းမြေပြန့်ဒေသ အားပိုင်ဆိုင်သောကချင်ဒူဝါများအားအခွန်အခပေးဆောင်ကြရလေသည်။
ကချင်ဒူဝါများထံအခွင့်တောင်းကာ နေထိုင်ကြ ရသည်။ ဒူဝါများကသတ်မှတ်ပေးသောနေရာတွင်လုပ်ကိုင်စားသောက်ခွင့်ရရှိကြသည်။ မရှိဆင်းရဲသော သူများအား ဒူဝါများက လိုလေသေးမရှိထောက်ပံ့ပေးသည်။ မုဆိုးမ၊ မုဆိုးဖို များအား ထောက်ပံ့ပေး သည်။ ခရီးသွားများ၊ ရွာတွင်းနားနေလိုလျင် ဒူဝါ၏အိမ်တွင်တည်းခိုကြသည်။ ၄င်းတို့တည်းခိုနေစဉ်ကာလပတ်လုံး အပူအပင်မရှိ ဒူဝါက ကျွေးမွေးသည်။
ယခုမြစ်ကြိးနားဟု အမည်တွင်သောနေရာသည် ယခင်က လထော်မျိုးနွယ်အကျဲ ဒူဝါများအုပ်ချုပ်သော ဒေသဖြစ်သည်။ အဓိကနေထိုင်သူများမှာ ကချင်နှင့် ရှမ်းတရုတ်များဖြစ်ကြပြီး ၄င်းတို့သည် လထော်မျိုးနွယ် ကချင်ဒူဝါများထံ အခွန်ပေးဆောင်ကြရသည်။ ဖော်ပြပါအကျဲဒူဝါများသည် ပဒေသရာဇ်ဖြစ်ကြသော်လည်း မြစ်ကြီးနားမြို့ ၏အနောက်ဖက် ဆယ့်လေးမိုင်အကွ အကျဲဒေသတွင်နေထိုင်ကြသည်။ မြစ်ကြီးနားလွင်ပြင်အား ပိုင်ပိုင်အုပ်ချုပ်သော ဒူဝါများဖြစ်လင့်ကစား မြစ်ကြီးနားတွင်နေထိုင်ခြင်းမရှိ၊ အကျဲအမည်ရှိနေရာတွင် နေထိုင်ခြင်းမှာ အထက်တွင်ဖော်ပြ သည့်အတိုင်း စစ်မက်တိုက်ခိုက်ရာတွင် နေရာကောင်းအား ရယူထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဖော်ပြပါအကျဲကျေးရွာသည်ကျူး ကျော်လာသူ ရန်သူများအား ခုခံတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရန် နေရာကောင်းဖြစ်သကဲ့သို့ ရန်သူများမှ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက် ရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသော မြေပြင်အနေအထားပင်ဖြစ်လေသည်။ ထို့ကြောင့် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြိးအချိန် မဟာမိတ်တပ်များသည် ´ဧရာဝတီမြစ်အား ဘောတံတား ( ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးသော ဘောတံတား၊ Pontoon Bridge) တည်ဆောက်ရန်နေရာရွေးချယ်ရာတွင် အကျဲကျေးရွာအားရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ၄င်းနေရာသည် Akye lunghtawn ဟုအမည်ရှိသည်။
ဗန်းမော်ဒေသဖက် ( ကချင်အခေါ် မန်မော်) တွင်လည်း ဂေါ်ရီဒူဝါ၊ လဖိုင်ဒူဝါ၊ မရန်ဒူဝါ၊ ဘန်ဂေါ်ဒူဝါ များသည် တောင်ပေါ်ဒေသ ( ဥပမာ စိန်လုံတောင်တန်း) များတွင် နေထိုင်ကြသော်လည်း ၄င်းဒေသမြေပြန့်တစ်ခုလုံး ချုပ်ကိုင်ထား ကာ အုပ်ချုပ်ကြသည်။ ၄င်းမြေပြန့်နေ ကချင်ရှမ်းတရုတ် ဗမာ အစရှိသူတို့သည် ကချင်ဒူဝါများအား အခွန်ပေး ဆောင်ကြရသည်။ သို့သော်လည်း 1884 တွင် ဗန်းမော်မြေပြန့်နေသူများ သည် ကချင်ဒူဝါများအား အခွန်ပေးဆောင်ရန် ငြင်းပယ်မှုပြုလုပ်လာကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကချင်ဒူဝါများဖြစ်ကြသော ဂေါ်ရီဒူဝါ၊ မထန်ဒူဝါ၊ မတင်ဒူဝါ၊ ဖုန်ကန်ဒူဝါ၊ လဖိုင်ဒူဝါ အစရှိသည့် ကချင်ဒူဝါများမှ ဗန်းမော်မြို့တစ်မြို့လုံးအား မီးရှို့ဖျက်ဆီး လိုက်ကြလေသည်။ " The Shan villages in the plains were completely at the mercy of the hill people. Each village was alternately "protected" and blackmailed by the capricious Kachins ( Burma Gazetteer, Bhamo District. P-21) ဆိုလိုသည်မှာ မြေပြန့်ရှိ ရှမ်းရွာများသည် ကချင်များ၏သနားကြင်နာမှု အောက်တွင်လုံး ၀ရှိကြသည်။ရွာတိုင်းသည်စိတ်ပြောင်းလွယ်သော ကချင်များ၏အကာ အကွယ်ပေးလိုက်၊ ဒုက္ခပေးလိုက် ဖြင့် ကချင်များ ၏အောက်တွင်ရှိကြသည်။
ကချင်ဒူဝါများမှ ဗန်းမော်တစ်မြို့လုံးအား မီးရှို့တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မြက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဖြစ် သော ပြင်သစ်သတင်းထောက်တစ်ဦးရေးသားထားသည်ကို Major Enriquez မှ The Races of Burma အမည်ရှိစာအုပ်တွင်အောက်ပါအတိုင်းရေးသားထားလေသည်။ They are keen traders, work cheerfully fromamember of that sorely-tired expedition from Mandalay to Monmien. But one reconizes now its truth, justice and penetration. In 1872 the Kachin attacked Mogaung, killed the Burmese official, and took the Amber Mines which they worked onfafeeble scale. In December 1884, (the last year of Burmese admistration) When Bhamo was captured by Kachins and Chinese and burnt from end to end. Only the buildings and property of the European Missionaries were spared. The Burmese Governor and garrison barely escaped with their lives to the river.
ကချင်များသည် ကုန်သွယ်ခြင်း ပျော်ရွှင်စွာအ လုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း ရှိနေကြပြီဖြစ်သည်ဟု မန္တလေးမှ မုန်းမြန်းသွား အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ရက်ရောစွာ မှတ်ချက်ပြုသော်လည်း အခြားတစ်ဦးမှတ်ချက်ပြုရာတွင် မြန်မာဘုရင်စိုးစံသည့် နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်သော 1884 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ တွင် ကချင်များနှင့် တရုတ်တို့သည် ဗန်းမော်မြို့အား သိမ်းပိုက်ကာ မြို့၏တစ်ဖက်စွန်းမှ တစ်ဖက်စွန်းတိုင်အောင် မီးရှို့ပစ်လေသည်။ ဗမာမင်း မြို့ဝန် နှင့် စစ်သည်များသည် ၄င်းတို့အသက်ချမ်းသာရရန် မြစ်ဖက်သို့ထွက်ပြေးကြလေ သည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် Burma Gazetteer , Bhamo District စာအုပ်တွင် အောက်ပါအတိုင်းရေးသားထားပြန်လေသည်။ The Kachins controlled the trade- routes and terrorised the town, and the authority of the Burmese government was merely nomily (Page-90-91). ဗန်းမော်ဒေသ၏ ကုန်သွယ်ရေးလမ်း ကြောင်းအား ကချင်များကထိန်းချုပ်ထားကြသည်။ ဗန်းမော်ရှိ ဗမာအစိုးရဆိုသည်မှာလည်း အည်မျှသာလျင်ဖြစ်လေ သည်။ ထို့ပြင် ဗန်းမော်မြို့အားထပ်မံမှတ်ချက်ပြုသည်မှာ "Bhamo is hardly recognizble as the florishing town it was some nine years ago. It is ruined and deserted" The inhabitants slept on sand banks and in boats at night prepared for instant flight in case ofaKachin attack ( Page-91). ဆိုလိုသည်မှာ လွန်ခဲ့သော ကိုးနှစ်ခန့်က ဗန်းမော်မြို့ စည်ကားခဲ့သည်ဆိုသည်ကို အသိအမှတ်ပြုရန်ခက်ခဲသည်။ ဗန်းမော်မြို့သည်ပျက်စီးနေပြီး လူသူကင်းမဲ့လျက်ရှိနေသည်။ ညအချိန်ရောက်လျင် မြို့နေသူတို့သည် မြစ်ကမ်းဘေးရှိ သဲသောင်များတွင် အိပ်စက်ကြသည်။ အချို့မှာ လှေများတွင် နေထိုင်နေကြသည်၊ ကချင်များတိုက်ခိုက်လာလျင် ထွက်ပြေး နိုင်ရန်အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားကြခြင်းဖြစ်သည်)
ဗမာဒေသသာမက ကချင်၊ ချင်း၊ ရှမ်းဒေသများကိုပါ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည့် ဗြိတိသျှ ဧကရီ ဘုရင်မ ကြီး၏ ရှေ့ပြေးအဖွဲ့ဖြစ်သော ကာနယ်စလေဒင်နှင့်ဒေါက်တာအင်ဒါဆင်တို့သည် 1874 ခုနှစ်တွင် ဗန်းမော်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာကြ၏။ လာရောက်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ ဗန်းမော်ဒေသသည် ကချင်လူမျိုးများ ပိုင်နက် ဟုတ်မ ဟုတ်နှင့် တရုတ်ပြည်သို့ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြင့် ၄င်းတို့ရောက်ရှိလာ ကြသော အခါ ဗန်းမော်မြို့ဆိပ်ကမ်းတွင် ကချင်ပဒေသရာဇ်ဒူဝါဖြစ်သော ပုန်းလင်ဒူဝါကလာရောက်ကြိုဆို၏။ ဗိုလ်မှူးကြီးစလေ ဒင်နှင့် ဒေါက်တာအင်ဒါဆင်တို့သည် ပုန်းလင်ဒူဝါ၀တ်ဆင်ထားသော အ၀တ်အစားများအား ကြည့်ကာအံ့အား သင့်ခဲ့ကြ၏။ ခေါင်းတွင် ကချင်ခေါင်းပေါင်း၊ တရုတ်တို့၏သင်တိုင်းရှည်ဝတ်ရုံ၊ ဗမာမင်းစီးသောရွှေဖိနပ်၊ နောက်ဖက်မှ ကျွန်များက ဗမာမင်းအသုံးပြုသော ရွှေထီးကိုမိုးထားပေးသည်ဆို၏။
ဗြိတိသျှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကလည်း မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ယင်းကဲ့သို့ဝတ် ဆင်ထားသနည်း`ဟုမေးသော် ပုန်းလင်ဒူဝါပြန်ပြောသည်မျာ ကချင်များ သည် မည်သည့်တရုတ်မင်း၊ ဗမာမင်း၏လက် အောက်မှ မဟုတ်သည်ကို ပြသလိုသဖြင့် ၀တ်ဆင်ထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟူ ၍ဖြစ်၏။ သို့ဖြင့် ဗြိတိသျှ ကိုယ်စားလှယ်အ ဖွဲ့သည် ဗန်းမော်မြို့သာမက တရုတ်ပြည်သွားလမ်း ကြောင်းမျုားအား လုံးအား ကချင်များက ထိန်းချုပ် ထား သည်ကိုသိရှိ တွေ့မြင်ကြရတော့သည်။ သို့ဖြင့် ကချင်ဒူဝါများအား အကူအညီ တောင်း ကာ ကချင်လူမျိုး လမ်းပြများဖြင့် တရုတ်ပြည် ထိန်ချုံးသို့ ခရီးထွက်ကြလေသည်။ သို့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ဗြိတိသျှတို့အား ကချင်များက သင်္ကာမကင်း ဖြစ်သဖြင့် ၄င်းရည်ရွယ်ထားသည့် တရုတ်ပြည် ထိန်ချုံးမြို့၊ Tingchong (or) Tingyueh သို့မရောက်ရှိဘဲ လမ်းခုလပ်မှ ပြန်လာခဲ့ကြသည် ( Mandalay to Monmien, by Dr. Anderson.1876) . ပုန်းလင်ဒူဝါသည် ဗန်းမော်မြို့တွင်နေ ထိုင်ခြင်းမရှိ၊ ဗန်းမော်အောက်ပိုင်း ပုန်းလင်အရပ်တွင်နေ ထိုင်၏။ သို့သော်လည်း ဗြိတိသျှတို့အားကြိုဆိုရာတွင် မည် သည့်ဗမာမင်း၏ ကိုယ်စားလှယ်ကမှ ကြိုဆိုခြင်းမပြု၊ ကချင်ဒူဝါကကြိုဆိုခဲ့၏။ ဗန်းမော်ဒေသသည် ကချင်လူမျိုးများ ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိခြင်းအားပြသခြင်း ပင်ဖြစ်လေသည်။ ထို့အတူ ဗန်းမော်မြို့တွင်းနေထိုင်ကြသောသူများအားလုံးသည် လည်း ပုန်းလင်ဒူဝါနှင့် အခြားသော ကချင်ဒူဝါများအား အခွန်အခ ပေးဆောင်ကြရလေသည်။
1873 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဇီင်္းလဖိုင်ဒူဝါ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော မိုးကောင်း ( ယခင်အမည် မဟောင်၊ ယခုမိုးကောင်းမြို့ဟုအမည်တွင်သော မြို့၏အနောက်ဖက် ဆယ်မိုင်အကွာတွင်တည်ရှိသော မိုးကောင်းမြို့ဟောင်း) မြို့အား တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြသည်။ (မိုးကောင်းဟုဆိုရာဝယ် ယခု လက်ရှိတည်ရှိသော မိုးကောင်းမြို့ နယ်တစ်ခုလုံးအား ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ထိုအချိန်က မိုးကောင်း ( မဟောင်) မြို့သည် ဘေးပတ်လည် အိမ်ခြေနှစ်ရာ ခန့်သာရှိသောမြို့ကလေးဖြစ်သည်ရှေ့မီနောက်မီ ကချင်လူကြီးများကဆို၏။ ရုတ်တရက်မစဉ်းစားဘဲ တွေးမြင်မိမည် ဆိုလျင် ယနေ့ တည်ရှိနေသော မိုးကောင်းမြို့နယ်တစ်ခုလုံးအလားထင်မှတ်ကြလေသည်။ )
ထိုသို့တိုက်ခိုက်ဖျက်မီးရှို့ပစ်ရာတွင် မင်းတုန်းမင်းခန့်ထားသည်ဆိုသော မိုးကောင်းမြို့ဝန် ဦးကုလားအား သတ်လိုက်ကြ၏ ( The Races of Burma, by Major Enriquez. 1935) ။ အကြောင်းရင်းမှာ ကချင်များထံ အခွန် ကောက်ရန်ဆောင်ရွက်လာကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဆို၏။
၄င်းမိုးကောင်းမြို့မှသံလမ်းအောက်ဖက်နန်းခွင်( ကချင် အမည် နမ်ခန်၊ Nam Hkan) အထိ၊ အနောက်ဖက် ကားမိုင်းမြို့အနီးအထိ၊ အရှေ့ဖက် ဧရာဝတီမြစ်ရိုးအထိသည် ဇီးလဖိုင်ဒူဝါပိုင်နက်ဖြစ်၏။ ၄င်းဒေသတစ်ခုလုံးအားကချင်အမည်ဖြင့် ဇီးလဖိုင်ဒေသ ( Zi Lahpai mung) ဟုခေါ်၏။ ဇီးလဖိုင် ဒူဝါအုပ်ချုပ်၏။ ၄င်းဒေသနေသူများအားလုံးသည် ဇီးလဖိုင်ဒူဝါအား အခွန်ပေးဆောင်ရသည်မှာ ၁၉၆၄ ခုနှစ် ဒေသအ တွင်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်လာချိန်အထိဖြစ်သည်။ ယင်းမတည်ငြိမ်မှုများကြောင်း ဇီးလဖိုင်ဒူဝါ ဇော်နော် သည်လည်း မြစ်ကြီး နားမြို့ ဒူကထောင်ရပ်ကွက်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရသည်။ ( စကားချပ်- ဇီးလဖိုင်ဒူဝါဆိုသည်မှာ ၁၇၉၈ ခုနှစ်နှင့် ၁၈၂၀ ဗမာမင်း၏တပ်၊ မဟာဗနုလဦးဆောင်သောတပ်များ အာသံ သို့စစ်ချီရာတွင် ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းအ တိုင်းလှေ များဖြင့်တက်လာ၏။ မိုးကောင်းချောင်းမှတဆင့် ယခု မိုးကောင်းအရပ် တွင် ရှိနေသော ကချင်ပဒေသရာဇ် ဇီးလဖိုင်ဒူဝါနှင့်တွေ့ဆုံကာ စစ်ရေးအကူအညီတောင်းခံ၏၊ ဇီးလဖိုင်ဒူဝါမှ အခြားသော ကချင်ပဒေသရာဇ် ဒိုင်ဖာဒူဝါ၊ ဆမားဒူဝါ၊ အစရှိသူတို့အားဆက်လက်အကူအညီတောင်းကာအာသံသို့စစ်သည်၇၅၀၀ ဖြင့်လိုက်ပါကူညီတိုက်ခိုက် ပေးခဲ့ကြ၏၊ ဦးတင်မောင်ရင်၊ ခေတ်မြန်မာတည်ဟန်၊ The Making of Burma. Dorothy Woodman)
၁၈၇၃ ခုနှစ် မိုးကောင်းမြို့ဟောင်း ( မဟောင်) အား ကချင်ဒူဝါများတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာတွင် ၄င်း မဟောင် ကျေးရွာ သူကြီးဖြစ်သာ ဦး------အား ဆမားဒူဝါဂွမ်ဆိုင်းလီက မြေပေါ်တွင် နင်းထားကာ ခေါင်းအားသေ နတ်ဖြင့်တေ့ ကာ ပစ်သတ်မည်ပြု၏။ ထိုအခါ ၄င်းသူကြီးက သူ့အားအသက်ချမ်းသာပေးစေလိုကြောင်း၊ ကချင်များနှင့် ညီအစ်ကိုမ ဟာမိတ်ဖွဲ့လိုကြောင်း၊ ကချင်များညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ဆောင်ရွက်နေထိုင်ပါ မည်ဟုတောင်း ပန်သော ကြောင့် အသက်ချမ်းသာပေး၏။ နောက်ပိုင်း ဗြိတိသျှတို့နှင့် တိုက်ခိုက်ရာ တွင် အင်အားမမျှသဖြင့် ကချင်များ နှင့်အတူ မြောက်ပိုင်း တြိဂံဒေသသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြ၏။ သူကြီးကတော်မှာလည်း မြောက်ပိုင်း တြိဂံဒေသ တွင်ကွယ် လွန်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းလာသောအခါတွင်မှ မိုးကောင်းမြို့သို့ ပြန်လည်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ မိုးကောင်း၊ ကားမိုင်းဖက်တွင် နေထိုင်ကြသည့် ကချင်များ၏ ဗြိတိသျှတို့အား ခုခံတိုက်ခိုက်မှုသည် အလွန်ကျော်ကြား သော ခုခံမှုပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ခုခံတိုက်ခိုက်ရာတွင် ကချင်မှ လွဲ၍ အခြားမည်သည့် လူမျိုးများမှ ကူညီခြင်း၊ ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိကြချေ။ ဗမာလူမျိုးများလည်းမရှိ။ အကြောင်းမှာ ကချင်ပိုင်ဒေသဖြစ်သော ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ (ယခင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့် ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ဆမားဒူဝါ ဆင်ဝါးနောင်၏သား၊ ဆမားဒူဝါ ကျော်ဖားနော် ၏ နှုတ်ပြောသမိုင်း)
၁၈၈၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင်မန္တလေးရှိ ဗမာမင်းနေပြည်တော်အား ဗြိတိသျှတို့ သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ၁၈၈၆ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှ တို့သည် ၄င်းတို့ လေ့လာထားပြီးဖြစ်သည့် မည်သူမျှမပိုင်သည့် ( No man’s land) ကချင်ဒေသ အားသိမ်းပိုက်ရန် ချီတက်လာကြတော့သည်။ ကချင်ဒေသသို့ ဗြိတိသျှတို့ချီတက်လာရာတွင် မည်သည့်ဗ မာမင်း၏ စစ်သည်ကမှ ခုခံတိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိခဲ့၊ ဗမာလူမျိုးများလည်းမရှိ၊ ဖုန်ကန်ဒူဝါ၊ လဖိုင်ဒူဝါ၊ မတင်ဒူဝါ၊ မထန်ဒူဝါ၊ လထော်ဒူဝါ၊ မိုင်ရောန်းဒူဝါ၊ ဆမားဒူဝါ အစရှိသော ဒူဝါများနှင့် ကချင်လူမျိုးများက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခုခံတိုက်ခိုက်ကြ သည်။ ဗြိတိသျှတို့အား ကချင်လူမျိုးများခုခံတိုက်ခိုက်မှုသည် လူဦးရေအနည်းဆုံးနှင့် သက်တမ်းအကြာဆုံးဖြစ်ကြောင်း ဗြိတိသျှ တို့ပင်သြချကာ ၀န်ခံခဲ့ကြရလေသည်။
၁၉၄၆ နိုဝင်ဘာလ နှင့် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဦးအောင်ဆန်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မြစ်ကြီးနားမြို့ သို့ရောက် ရှိလာ၏။ အကြောင်းမှာ ကချင်-ဗမာချစ်ကြည်ရေးပြုလုပ်ရန်ဖြစ်၏။ ထိုသို့ရောက်ခိုက်တွင် ဟိုပင်ဒေသနေ သခင်ပြန့်ဦး ဆောင်သည့် ဖဆပလအဖွဲ့ဝင်များလည်း ဦးအောင်ဆန်းအားလာရောက်တွေ့ဆုံကြ၏ ( စကားချပ်-ထိုအချိန်တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင်ဖဆပလအဖွဲ့မရှိသေးချေ၊ဟိုပင်ကျေးရွာ၌သာရှိသည်) ထို့နောက်၎င်းတို့ကဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းအား တင်ပြသည့်အချက်တစ်ချက်မှာကချင်ဒူဝါများအားကချင်မဟုတ်သူများကအခွန်ဆောင်နေရကြောင်း၊ ကချင်မဟုတ်သူ များသည်ကချင်ဒူဝါများအားအခွန်မပေးလိုတော့သဖြင့်၎င်းအခွန်ပေးဆောင်မှုဥပဒေအားရုပ်သိမ်းပေးနိုင်ရန် တောင်းဆို ကြ၏။ ထိုအခါ ဦးအောင်ဆန်းက `` ဘယ်အချိန်ကနေပေးဆောင်နေရသလဲ´´ ဟုပြန်မေး၏။ သခင်ပြန့်နှင့် အဖွဲ့က လည်း “ဘိုးဘွားခေတ်ကတည်းကနေအခွန်ပေးနေရကြောင်း” ပြန်ပြော၏။ ထိုနောက် ဦးအောင်ဆန်းမှ ပြန်ပြော သည်မှာ “ဒီလိုဆိုဆက်ပြီးပေးကြ”ဟူ၍ဖြစ်သည်။ (ဦးဖော်ယူနောင်ဘား၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းအမေရိကန်-ကချင်ရိန်း ဂျားတပ် ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး၊ ကချင်သမိုင်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သမိုင်းဘာသာပြန် စာအုပ်မြောက်များ စွာ ထုတ်ဝေခဲ့သူ ၏ပြောပြ ချက်) ။
ကချင်ဒေသအား အုပ်ချုပ်သူသည် ဦးအောင်ဆန်းမဟုတ်ဘဲ၊ ဘုရင်ခံမှ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်သည်ကို ၄င်းဖဆပလ အဖွဲ့ဝင်များသိဟန်မတူချေ။ ၄င်းတို့အခွန်ပေးဆောင်ရသော ကချင်ဒူဝါများမှာ ဇီးလဖိုင်ဒူဝါ၊ ၀ါ့ဘော်ဒူဝါ၊ နော့ဂူဒူဝါ အစရှိသည့် ကချင်ဒူဝါများ ပင်ဖြစ်ကြလေသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ဟိုပင်ဒေသသည် ၀ါ့ဘော်ဒူဝါ ၏ ပိုင်နက်ဖြစ်သည် ( ယခင်ကချင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးဟောင်း နှင့် ပင်လုံစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးသူ ပဒေသရာဇ်ဒူဝါ ၀ါ့ဘော်ဇော်ရစ် တို့မိသားစု ၊ ကနဦးပိုင်ဆိုင်သူမှာ ဇီးလဖိုင်ဒူဝါဖြစ်ပြီး ဒူဝါကြီးမှ ၄င်း၏ခမည်းခမက်တော်စပ်သော ၀ါ့ဘော်ဒူဝါအား နယ်မြေခွဲ ပေး ခြင်းဖြစ်သည်)
၄င်းဒေသအား အုပ်ချုပ်အခွန်ကောက်သည့် ၀ါ့ဘော်ဒူဝါသည် ဟိုပင်မြို့တွင်းနေထိုင်ခြင်းမရှိ၊ ၄င်းသည် ၀ါ့ဘော် ဘွမ်အမည်ရှိ တောင်ပေါ်တွင် အခြွေအရံအသင်းပင်းပြည့်စုံစွာဖြင့်နေထိုင်၏။ ( ၀ါ့ဘော်ဘွမ်=၀ါ့ဘော်တောင်) ။ သို့ သော်လည်း ဟိုပင်ဒေသတခွင်လုံးနေ ကချင် နှင့် ကချင်မဟုတ်သူများအားလုံးသည် ၀ါ့ဘော်ဒူဝါအား အခွန်ပေး ဆက် ကြရသည်။ ဟိုပင် ဆိုသောအမည်မှာလည်း ကချင်အမည် Hkupang မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ကာ ၄င်းဒေသ နေသူ များအားလုံးသည် ၀ါ့ဘော်ဒူဝါများထံ အခွင့်တောင်းကာနေထိုင်သူများ၊ ဒူဝါမှ နေရာချထားပေး သောသူများ ပင်ဖြစ် ကြလေသည်။
လွတ်လပ်ရေးမရယူမီအချိန်အထိ မိမိပြည်ထောင်နှင့် မိမိတို့ သီးသန့်နေထိုင်ခဲ့ကြစဉ် ကချင်၊ ချင်း၊ ရှမ်း ဒေသများအား ဗြိတိသျှတို့က Frontier Area ဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ အမှန်လည်း နယ်ခြားပြည်ထောင်များသာ လျင်ဖြစ် သည်။ ထို့ကြောင့် ၄င်းဒေသများအား ဗြိတိသျှအစိုးရက တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်သည်။ ဗြိတိသျှတို့သည် ရှမ်းပဒေသရာဇ်၊ ကချင်ပဒေသရာဇ်၊ ချင်းပဒေသရာဇ် တို့အား နဂိုမူလ ၄င်းတို့၏ အခွင့်အာဏာများကို ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှအစိုးရအား သစ္စာခံရန်သာလိုအပ်သည်။ ကချင်၊ ချင်း၊ ရှမ်း ဒေသများသို့ ဗမာလူမျိုးအမှုထမ်းအချို့ ရောက်လာ ကြသည်။
သို့သော်လည်း ၄င်းတို့သည် ဗမာမင်း၏ အမှုထမ်းများမဟုတ်ကြဘဲ ဗြိတိသျှ အစိုးရ မင်းမှုထမ်းများသာ လျင်ဖြစ်သည်။ ဖဆပလ အစိုးရဟုခေါ်ဝေါ်သည့်တိုင် ၄င်းတို့သည် ကချင်၊ ချင်း၊ ရှမ်း ဒေသများအားအုပ်ချုပ်ခွင့်မရှိ၊ Burma Proper ဖြစ်သော ဗမာဒေသနှင့် ဗမာလူမျိုးများတွင်သာ အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိကြလေ သည်။
ကချင်နဲ့မြေပြန့် ဘာဆိုင်လို့လည်း ဟူသောစကားအား လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်ကျော်ခန့်မှ စတင်ကြား လာရသည်။ တချို့သောသူများက တီးတိုးပြောဆိုသလို၊ အချို့မှာ ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပင်ပြောဆိုလာကြသည်။ ယင်းစကား အား ပြောဆိုချင်နေသည်မှာ ကြာမြင့်နေပြီဟုလည်းထင်မြင်ရသည်။ သမိုင်းကြောင်းမသိသောသူများ (သို့) သိလျက်ပင် ကချင်ဒေသာအား၊ ကချင်လူမျိုးများအား နှိမ့်ချလိုသောဆန္ဒ၊ ကချင်ဒေသမှ ကချင်လူမျိုးများနှင့် သမိုင်းကြောင်းအား ဖြောက်ဖျက်လိုသော ဆန္ဒများကြောင့်သာလျင် ယင်းကဲ့သို့ပြောဆိုခြင်းဖြစ်မည်မှာသံသ ယဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိချေ။
အချို့နေရာဒေသများသည်လည်း ကချင်အမည်မဟုတ်ပါဟုပြောဆိုမှုများအများအပြားပင်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ မှန်ပါ သည်။ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီအချိန်များတွင် ကချင်ဒေသတွင် ဗမာအမည်ဖြင့် မှည့်ခေါ်သော ဒေသအ မည်မရှိ သလောက်ဖြစ်သည်။ ကချင်ဒေသအားလုံးသည် ကချင်ပဒေသရာဇ်ဒူဝါများ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ပိုင်နက်အမည်နာမ လည်းရှိပြီး သားဖြစ်သည်။ လထော်ဂါး ( လထော်ဒူဝါ မျိုးနွယ်စုများပိုင်ဒေသ)၊ လဖိုင်ဂါး ( လဖိုင် ဒူဝါမျိုးနွယ်စုများ ပိုင်ဒေသ)၊ မရန်ဂါး ( မရန် ဒူဝါမျိုးနွယ်စုများပိုင်ဒေသ) ၊ အင်ခွမ်ဂါး ( အင်ခွမ် ဒူဝါမျိုး နွယ်စုများပိုင်ဒေသ) မရစ်ဂါး (မရစ် ဒူဝါမျိုးနွယ်စုများပိုင်ဒေသ )၊ စသည်ဖြင့် နယ်မြေအားလုံးသတ်မှတ်ရှိပြီးသားဖြစ်၏ ထို့ပြင် တရုတ်ပြည် ဖက်တွင်လည်း ရှဒန်ကရုန် ( Shadan krung) အင်ခွမ်ကရုန် ( NHkum krung) အိန္ဒိယ နိုင်ငံ အာသံဒေသရှိ ကချင်ဒူဝါ များသည် ရှေးယခင်ပဒေ သရာဇ်အာဏာများအား ယခုတိုင်ကျင့်သုံးနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယ အစိုးရမှလည်းခွင့်ပြုထား ဆဲပင်ဖြစ် သည်။
မြန်မာ ဘာသာအားဖြင့် တောင်တန်းဒေသဟုအမည်ကင်ပွန်းတပ်ခြင်းပြုသော်လည်း ကချင်လူမျိုးများကိုယ်တိုင် ဂျိန်းဖေါစကားဖြင့် ဂျိန်းဖေါမုန်းဒန် (Jinghpaw Mungdan) ၊ မြန်မာလိုဖွင့်ဆိုရလျင် ဂျိန်းဖေါနိုင်ငံ၊ ဂျိန်းဖေါ ပြည်ထောင် ပင်ဖြစ်သည်။ တောင်တန်းဒေသဖြစ်သော်လည်း ကချင်လူမျိုးများ၏နိုင်ငံပြည်ထောင်ပင်ဖြစ်သည်။ လွန်လပ်ရေးရပြီး နောက် ဗမာအများကြီးစိုးသော အစိုးရအဖွဲ့က ဒေသအမည်များအား ဗမာမှုအမည်ပြုခဲ့ကြလေသည်။ ဥပမာ ယခုမိုး ကောင်းမြို့နယ် ပင်းဘောကျေးရွာ အမည်ရင်းသည် ကချင်အမည် Bang Baw ဖြစ်သည်။ ယခင်ကာလ က ကချင်ပ ဒေသရာဇ် Bang Baw Duwa ပိုင်ဖြစ်သည်။
၄င်း၏အောက်နားဖက် ယခုလက်ရှိအမည် ဘီလူးမြို့သည်လည်း ကချင် ပဒေသရာဇ် Balu Duwa ( ဘ လူးဒူဝါပိုင်) ပိုင် ဘလူးဂါး၊ ဘလူးဒေသပင်ဖြစ်သည်။ ၄င်းကိုလည်း မြန်မာမှုပြုကာ ဘီလူး ဟု ပြောင်းပြန်သည်။ ရွှေကူဒေသ ရှိကချင်အမည် Sharat ta အား ဗမာအမည်ဖြင့် သရက်သာပြုသည်။ မြန်မာအ မည် မြန်မာမှုပြုပြီးနောက် ကချင်နှင့်မသက်ဆိုင်ဟု ဆိုလာကြပြန်သည်။ ဗမာအခေါ်မဲဇာသည်လည်း ကချင်ပဒေသရာဇ် မိုင်ရောင်း ဒူဝါ Mairawn Duwa ၏ Myen Za အမည်ရှိဒေသဖြစ်၏။ မြန်မာလိုရေးရာတွင် အတိအကျမရေးနိုင်ရာ Me Za မဲဇာ အမည်ဖြစ်သွား၏။ တစ်နိုင်ငံလုံး မသိသူမရှိဖြစ်သောမြစ်ဆုံ တန်ဖရဲကျေးရွာကြီးအားဖျက်ဆီးပြီး ရွာကိုပါ ပြောင်းရွှေ့ပစ်သည်။အောင်မြင်သာဟူသောအမည်မှည့်ခေါ်သည်။
ကချင်ဒေသ သည်တောင်တန်းဒေသဖြစ်သည်မှာမှန်၏။ သို့သော်လည်း မြေပြန့်များလည်းရှိချေ၏။ အထက် ဖော်ပြခဲ့ သည့် ဇီးလဖိုင် ဒူဝါ ပိုင်နက်ဖြစ်သော ဇီးလဖိုင်ဂါး၊ ဆမားဒူဝါ၊ ဒိုင်ဖာဒူဝါ၊ လဂျောန်ဒူဝါ၊ အနိုင်းဒူဝါ အစရှိသဖြင့် ဒူဝါများပိုင်ဆိုင်သောဟူးကောင်းလွင်ပြင်၊လထော်မျိုးနွယ်ဒူဝါများပိုင်ဆိုင်သည့်မြစ်ကြီးနားလွင်ပြင်များဖြစ်သည်။ လွင်ပြင် မြေပြန့်ဒေသအားလုံးသည်လည်း ကချင်ပဒေသရာဇ် ဒူဝါများ ပိုင်ဆိုင်အုပ်ချုပ် အခွန်ကောက်ခဲ့ကြသည်။ ကချင်ဒေသ၏ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာလျင် မြေပြန့်ဟူ၍သတ်မှတ်နိုင်သည်။ နည်းပါးသော်လည်း ကချင်ဒူဝါများသာပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဗြိတိသျှမရောက်မီအချိန်အထိ မည်သည့် ဗမာ မင်းလက်အောက်ခံကမှ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့၊ ရောက်လာ သူအချို့မှာလည်းကချင်ဒူဝါများထံအကူအညီတောင်းခံခြင်းသာရှိခဲ့လေသည်။ ( ဥပမာမဟာဗန္ဒုလအာသံသို့ စစ်ချီရာ တွင် မိုးကောင်း ရှိ ကချင်ပဒေသရာဇ် ဇီးလဖိုင်ဒူဝါများအား အကူအညီတောင်းခြင်း၊ နယ်မြေဖြတ်သန်းခွင့် တောင်းခြင်း)
ကချင်ဒေသအားမှည့်ခေါ်ရာတွင် ကချင်အမည် ဘွမ် ( Bum)၊ ကောင် ( Kawng) ၊ ယန် ( Yang) ၊ ဂါး ( Ga) စသည်ဖြင့်မှည့်ခေါ်ခဲ့ကြလေသည်။ ဆဒုံးဘွမ်၊ ဂေါ်ရီဘွမ်၊ အူမားဘွမ်၊ အလောဘွမ်၊ စိန်လုံဘွမ်၊ အူဒီဘွမ်၊ လွယ်ယန်ဘွမ်၊ ၀ါ့ဘော်ဘွမ်၊ ဒိုင်ဖါဘွမ်၊ မဂျီဘွမ်၊ ဖုန်ကန်ဘွမ်၊ နားဖေါ့ဘွမ်၊ ပါဂျောင်ဘွမ်၊ လမာဘွမ်၊ လဖိုင်ဂါး၊ မရန်ဂါး၊ အင်ခွမ်ဂါး၊ လထော်ဂါး၊ ပဒစ်ဂါး၊ မရန်ဂါး၊ လိုင်ဆိုင်းဂါး၊ ကံဆီးဂါး၊ ဂါးရာယန်၊ ဒေါ့ဖွမ်းယန်၊ နမ့်ဆန်ယန်၊ ကန်ဒေါ်ယန်၊ လွယ်လီယန်၊ မဒီးယန်၊ နွမ်မော်ယန်၊ ဂတ်ရှန်ယန် ၊ လုံရှာယန်၊ ရှိန်ဗွေယန်၊ ဆွမ်ပီယန် စသည်ဖြင့်မှည့်ခေါ်ကြလေသည်။
(Wunpawng Shingni Journal အတွဲ (၃) အမှတ်(၄) ပါ ဆောင်းပါးဖြစ်သည်)
မူရင်း link https://www.facebook.com/kareng.baw...
Thailand Mung dan kata hta dap jung laiwa sai, Wun...
Jinghpaw HtungHking Shachyen Shaga Ai Lam. Daw (1)...